Yemahara Twitch Vateveri | Tenga Vateveri veTwitch | Streamular
Tenga Hashtags Tsvagiridzo & Mbiri Kugonesa
Tenga Vateveri Vanotsvaga Ku Instagram
Tenga Automatic Likes For Instagram
Tenga Instagram Marketing Package Deals
Tenga YouTube SEO
Yemahara Twitch Vateveri | Tenga Vateveri veTwitch
Kura Yako Twitch Channel Kurumidza Kupfuura Kare Kare neVateveri Vemahara Twitch!
Shandisa sevhisi yedu kuwana mahara vateveri veTwitch vari vechokwadi uye vakananga kune yako niche, kana kungotenga vateveri veTwitch kuti ikure nekukurumidza.
Wana Mahara Twitch Vateveri or Tenga Vateveri Vateveri
Makiyi Akakosha & Bhenefiti
Yemahara Kuti Ushandise
Kana iwe usina hanya kutora maminetsi mashoma zuva rega rega kuti uite chirongwa, isu tinopa zvakanakisa sarudzo dzinoendesa kune gumi mahara vateveri & 10 yemahara Twitch inofarira pazuva.
Vapepeti senge iwe varikushandisa sevhisi yekutsinhana iyi kuti uwane vanyoreri mberi nekunze pakati pevamwe maStreamer.
Yakachengeteka, Yakachengeteka, Yakachengeteka
Streamular`s sevhisi yakachengeteka uye yakachengeteka! Twitch chiteshi haapihwe chirango chekushandisa sevhisi yedu uye isu tinoshanda nekuvanzika, chengetedzo uye zvakavanzika zvakavanzika.
Kana iwe uchida kushanda nesimba uye otomatiki kuwana vateveri veTwitch uye zvavanoda zuva rega rega, saka tinokurudzira chirongwa chakabhadharwa chekugamuchira zero-kuyedza, kukura kwemazuva ese!
Ndiri Kuda Mahara Twitch Vateveri Zvino!
Tevedza nhanho idzi dziri nyore uye wedzera kukura kwako kweTwitch chiteshi mumaminetsi!
Wedzera Chiteshi Chako
Kukura Twitch Vateveri Mahara
Twitch ndeimwe yemapuratifomu anokurumidza kukura munharaunda paInternet. Iine vanopfuura mamirioni maviri vateveri vanotenderera mwedzi wega wega, Twitch inozivikanwa kwete chete nevechidiki chete asi zvizvarwa zvekare zvakare. Kubva pane mavhidhiyo anonakidza kuenda pamitambo yepamhepo, vashandisi vanogona kuwana chero chero mhando yezvinyorwa zvavari kutsvaga.
Iyo huru kwazvo yekutandarira papuratifomu
Wanga uchiziva here kuti Twitch ndiyo yepasirose huru kutenderera yevhidhiyo chikuva? Mushure mekutanga kwayo, yakatambira mamirioni masere vashanyi. Nhasi, Twitch account yeinenge 8% yemari yese inogadzirwa nepamhepo vhidhiyo yemitambo zvemukati. Izvo zviri chaizvo panotepfenyurwa zviririkuyerera zvemukati zvevateveri vavo. Hazvina kungotenderwa kumitambo yepamhepo- chikamu che "Kubata" chinowanikwa kune maartist kuratidza basa ravo kuvashandisi.
Kunze kwevaraidzo, Twitch yakavewo inharaunda inoshingairira kune avo vane zvavanofarira pamwe nekuzvivaraidza vanogona kuwana nzvimbo yavanowirirana. Kudyidzana kuburikidza nemakamuri ekukurukura uye ehupenyu mhinduro inoita kuti ruzivo rweTwitch ruwedzere kubatana uye kuve nehupenyu. Nokubatanidza mafeni nema streamers, Twitch inopa yakagadzikana chikuva chevashandisi kuona zvinonakidza zvemukati zviripo nenzira yerefu, mhenyu nhepfenyuro.
Nei ndichifanira kuve nevateveri paTwitch?
Kwete kungoona zvemukati, asi Twitch yave chinhu chakakosha sosi yemari kune vakawanda vanoyerera. Ivo vanoyerera kazhinji vanoziva kuti vazhinji vaoni vanodzoka vova vateveri. Huwandu hukuru hwevateveri hunogona kubatsira kunatsiridza mukurumbira wako sekuyerera.
Kana iwe uchida vateveri nekukurumidza uye uchida kuisa kushoma kushanda mazviri, unogona kutenga vateveri veTwitch kuti kukura kwako kufambe.
Mumakore achangopfuura, Twitch yakabatsira vanofambisa kuwana yakawanda mari. Vapepeti paTwitch vanogona kuwana mari nenzira dzakasiyana, senge kuburikidza nemari kubva kushambadziro, zvipo, kunyoreswa, kutengesa, uye mahukama ehukama. Vanotungamira vashandisi veTwitch vaita kutenderera mushando unoshanda webasa, nevamwe vashandisi vachiwana mari inosvika madhora mazana matatu nemakumi matatu emwedzi wega wega. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchifarira kugadzira Twitch nzvimbo yako yekushandira, kune nzira dzakawanda dzekugadzira idzo dzaunogona kuishandisa seinowana mari.
Kana iwe uchida kutanga kuwana kubva kuTwitch account yako, unofanirwa kuve neTwitch yakabatana, izvo zvinogoneka chete kana uine vashoma makumi mashanu evateveri pane yako Twitch chiteshi. Huwandu hukuru hwevateveri hunobatsira kunatsiridza mukurumbira wako sekuyerera uye kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane mari yakawanda uye kuve nemukurumbira paTwitch.
Kunze kwemari, pane zviuru zvezvikonzero nei uchifanira kufunga kuwedzera chikamu chevateveri veTwitch vauinazvo parizvino. Ngatitarisei zvimwe zveizvi pazasi:
1. Brand kuziva
Kuwana mucherechedzo wechiratidzo uri pakati pezvakakosha zvekushambadzira zvinangwa. Kana iwe uchida kukura bhizinesi pamhepo, iwe unofanirwa kunyatso kuzviisa pamberi. Izvi zvinodaro nekuti vatengi vanozoda kushandisa zviwanikwa zvavo pamhando dzavanoziva.
Zvemagariro midhiya chishandiso chikuru chinogonesa chinoshanda uye nekukurumidza chivakwa chechiratidzo. Izvo zvinobatsira kuti utengese zita rako pamberi pevamwe nekukurumidza uye nyore. Iyo inobvumira vateereri kuti vaone yako brand kazhinji, uye kunyangwe kana vanhu vasiri kufunga nezve zvigadzirwa zvako.
Chivakwa cheBrand chinonyanya kuvimba nechitarisiko, saka tora nguva yekudyara muhupo hwako hwepamhepo. Isa zvinokwezva zvinoonekwa senge yakanaka yekuvhara uye mapikicha mafoto. Gadzira ruzivo nezvako ruve nyore, kusanganisira zvauri, zvaunoita, ako masocial media chiteshi, uye nemabatiro aungaitwa.
2. Kutaurirana chikonzero
Imwe yenzira dzinokurumidza kuunza ruzivo pane chero nyaya ndeye kutumira nezvazvo pasocial media. Zvemukati zvinogona kutumirwa kakawanda, izvo zvinobatsira kuti zvionekwe nevanhu vazhinji. Kana iwe uri kuyedza kuunganidza kutariswa kweruzhinji kutenderedza chikonzero chakati, kuchinyora nekuchisimudzira paTwitch kunogona kukubatsira kuzadzisa ichi chinangwa.
Zvemukati zvirimo zvinogona kukwezva zvirinani kuona kukuru uye kukuita iwe unofarirwa. Kushandisa ma hashtag akakodzera kunogona kubatsira kutungamira vanhu kubva kune avo masocial media profiles kune rako rezita peji uye pakupedzisira kune webhusaiti yako kana iwe unayo. Izvi zvinokupa iwe yakanakisa kudzoka pane investment.
3. Wedzera traffic
Kuva nehukama hwehukama hwehukama hwakasimba kunoita kuti iwe ugone kuwedzera traffic kune yako zvemukati. Sezvo vezvenhau vanobatsira mukukwira kwetraffic ye chiteshi chako, traffic iwe yaunowana kubva kune yekutsvaga injini inowedzerawo. Kubatsira nemaitiro aya, zvakakosha kuti ufunge nezve izvo zvauri kutumira uye kuti unogovana kangani zvirimo. Kufunga nezve izvi zvinhu kunokutendera iwe kunongedza chaicho mutengi uye kusimudzira yako epamhepo kushambadzira kuyedza.
4. Kuwedzera mikana
Kuvandudza nharaunda yakasimba yevateveri pamhepo zvinoreva kuti unogona kuve anokurudzira. Izvi zvinogona kuturikira mauri kuwana mimwe mikana yekubatsira kuenderera mberi rako repamhepo bhizinesi. Kukwidziridzwa kwakabhadharwa, kubatana, uye kubatana-kushambadzira kunogona kuvhura mikova kumikana yakawanda yekutora bhizinesi rako padanho rinotevera.
Semuenzaniso, kana iwe wakabudirira kuvaka yakasimba vateveri base paTwitch yezvako zvemitambo zvemukati, vamwe vari kuyedza kuwana zvakafanana neyavo vanogona kukukumbira kuti uite wega kana kugovana hurukuro navo. Kubudirira kwekudyidzana uku kunogona kududzira kune ese ari maviri mari uye vateveri vako mese.
5. Ruzivo rwevateereri zvido uye zvavanofarira
Sezvo vateveri vako vachikura, iwe unosvika pakudzidza zvakawanda nezve niche yako. Dzidzira kuteerera munharaunda, chinova chiito chekutarisa nhaurirano dzakatenderedza misoro yakabatana neako chiteshi. Izvi zvinokubatsira kuti unzwisise zvinokosheswa nevateereri vako. Kupindirana navo mumakamuri ehurukuro kuchakubatsirawo iwe kuziva izvo vateereri vako vari kunetseka nazvo nekugadzira zvemukati izvo zvinonyanya kufadza kwavari.
Kuti urondedzere zvirinani kune vateereri vako, zvinobatsira kutarisa matauriro uye mutauro vanhu vanoshandisa kutaura. Panogona kuve nemisiyano murudzi rwekutaurirana kunoitika pakati pevechidiki uye mazera ekare. Funga nezvekuti ndiani iwe waunoshuvira kunongedza uye kupeta zvemukati zvako nenzira.
6. Kuwedzera kubatana
Nekuwedzera kukurumbira, iwe unenge uchiuya kune vamwe vashandisi vanogona kunge vari hukama hwakanaka kuva navo. Kunze kwekuve neyakavimbika fan base, iwe unogona zvakare kukudziridza kubatana nevezera rako zviratidziro, vatapi venhau, vaongorori, nezvimwe. Kubatana kwese kunotakura mukana wekuti iwe ukure chiteshi chako uchibatsira vamwe munzira.
7. Zvimwe kutengesa
Paunowana nhamba yakakura yevateveri, zvemukati zvinowoneka zvakanyanya kufadza, uye iwe uchawana yakawanda yekutengesa. Izvo zvakare zvinokupa iwe kukwikwidza pamupendero pane vamwe vanopa imwecheteyo mhando yechigadzirwa. Semuenzaniso, kana iwe uchimhanyisa chirongwa chekwikwidzi paTwitch uye uine vateveri zviuru zana, nepo mukwikwidzi achipa rudzi rwakafanana rwevaraidzo ane vateveri zana chete, mikana ndeyekuti vangangove vateveri vanozoteedzera kune yako chiteshi pane yavo. Kuva nekutevera kukuru kunoita kuti chiteshi chako chigare zvakanaka munezvevanhu nekuti zvinowedzera kuvimbika kwako semupi wezvakanaka, zvinonakidza zvemukati.
8. Kufarirwa kwemukati
Vateereri vazhinji vanogona kubatsira kuparadzira zvemukati zvako zvakanyanya. Kugadzira uye kugovana zvemukati zvemazuva ese zvinobatsira mukuparadzira zvemukati zvako mukati memagetsi ako uye netiweki dzevateveri vako. Kana ako ekushambadzira akabudirira, vateereri vako vanogona kunge vachigovana mitambo yako mazana kana zviuru zvezviuru zuva rega rega. Fungidzira iyo mhando yemhedzisiro iyo yaingave nayo pane yako brand uye iwe seanofambisa / musiki.
9. Kuvandudzwa kwekuvimba mazinga
Pakupera kwezuva, iwe unozonzwa kugutsikana nebasa rawakaita pakubatanidza boka revanhu vane zvido zvakafanana nezvido. Kuva murongi weboka rino kunozokugonesa kuti unzwe kudada nezvawakaita. Kubudirira kwako kunobatsira kunatsiridza chivimbo nekutenda kwauinako mukati mako uchikupa hunyanzvi hwekuramba uchigadzirisa basa rako.
Ndingaite sei kukura vateveri pane yangu Twitch chiteshi?
Kuwedzera huwandu hwevateveri vauinavo paTwitch kunogona kuwanikwa nenzira dzakasiyana. Kana iwe uchida kuzviita nekubhadhara mubhadharo, izvo zvakanaka. Asi kana iwe uchida kuwana vateveri vazhinji mahara, izvo zvinotori nani!
Hechino chokwadi pamusoro pekushandisa Twitch seyakagadzira mari: inogona kukubatsira zvakanyanya kana uine huwandu hwakadzikira hwevateveri pane yako chiteshi. Pakutanga, zvinogona kutora kumberi usati watanga kuona vateveri vazhinji. Uine imwe yekungwarira uye kuronga kuronga, iwe unenge uri munzira yako yekuita rakabudirira basa kunze kweako kudhinda account.
Kana iwe uri kutsvaga kuti uwane vateveri veTwitch mahara, pane nzira dzakawanda dzaungaite izvi. Zvakare, kana iwe uchida kushandisa imwe mari kubva kune yako yemagariro midhiya kushambadzira bhajeti, kune akawanda sarudzo dzeiyo futi. Nekudaro, zvinogara zvichikurudzirwa kupedza ako emahara sarudzo usati watendeukira kune akabhadharwa.
Zvakanakira kukura vateveri veTwitch mahara
Kana iwe uchingotanga neako Twitch chiteshi, shandisa mahara nzira kutanga kukura vateveri vako. Iyo inokutendera iwe kuyedza neyako mazano mune bhajeti-inoshamwaridzika nzira. Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kuti unzwisise kuti iwe unogona sei zvakanyanya kukura chiteshi chako kupihwa akasiyana siyana emahara uye akabhadharwa marongero aripo.
Nezvo, ngatione dzimwe nzira dzaungakure nadzo vateveri vako veTwitch mahara.
1. Shandisa Streamular.com yeMahara Twitch Vateveri
Uri kuverenga ichi chinyorwa pa Streamular.com, anotungamira mupi wevamiriri veTwitch vateveri, saka zvinongonzwisisika kuti isu titaure sevhisi yedu. Kunyangwe tichirerekera, isu takagadzira chikuva chedu kuti chishandise zvakanyanya uye chinyore zvakanyanya kune chero munhu anoda kuwana vateveri veTwitch mahara. Nekungoteedzera vamwe vashandisi veTwitch vezvakada zvakafanana, mukudzoka, network yedu ine vamwe vashandisi veTwitch vezvakada kufanana vanokutevera.
Iwe unogona kumisikidza iyo yemahara chirongwa chezuva nezuva uye nekudzoka zuva nezuva zuva kuti umise zvakare. Nekudaro, ichikubvumidza iwe kuti usingaperi mukure yako Twitch account yemahara.
Kana iwe usiri kufarira kuita basa rekushanyira Streamular.com nekutevera mamwe mafaera pese paunoda vateveri vazhinji veTwitch, saka unogona kupinda kuchirongwa chakabhadharwa, icho chinoda kuti iwe utevere vanhu 0 uye unomhanya otomatiki, uchiendesa vateveri kune vako profile zuva nezuva pasina chikonzero chekusimudza munwe kana kudzoka kuwebsite.
Zviuru zvevashandisi veTwitch vanotanga kuwana mahara maTwitch vateveri kuburikidza neshumiro yedu, asi pamhedzisiro inoshanda, tinokurudzira kuita zvimwe zvinhu kuti ukure zvinotevera. Ndokumbirawo kuti muverenge kuti mudzidze nezve dzimwe nzira dzekukudza vateveri vako veTwitch mahara.
2. Cherekedza nzira dzeTwitch dzinomhanyiswa nevamwe vanoyerera
Kuva chikuva chemagariro, Twitch inogona chete kukubatsira iwe kana iwe ukaita kubatana pairi. Unogona kuita izvi nenzira dzinoverengeka. Taura nevamwe vanofashukira uye tarisa yavo yekushambadzira zvemukati. Bata navo mumakamuri ehurukuro uye iva unoteerera kune mameseji kubva kune ese ari maviri mafirita uye mafeni. Ratidza kufarira kuziva zvakawanda nezvevamwe zvemukati uye kuvarumbidza pazivo yavo kana kana iwe ukaona zvavanofarira zvichinakidza.
Kana vamwe vashandisi vaona kuti unonakidza uye une hushamwari, ivo vanozoda kukutevera kumashure. Kana murwi akakurumbira akasarudza kukutevera, mikana ndeyekuti vateveri vavo vachatanga kukutevera.
Kuvandudza hukama nevamwe vanoyerera kunobatsira sezvo uchigona kukumbirana kuti vagamuchire kana kunyange kusimudzira chiteshi chako. Kudyidzana kunogona kuguma nekuratidzwa kwakanaka kwechako uye kunogona kuvaka zita rako. Paunenge uchivaka kudyidzana kwakadai, ita shuwa kuti iwe unofarira zvechokwadi kuita hushamwari nevamwe vashandisi. Izvi zvinogona kukubatsira kudzivirira kuve nemukurumbira wemumwe munhu anongobvunza vamwe kuzvisimudzira.
3. Enda kune zviitiko zvepamhepo uye meetups
Kuziva vamwe vashandisi uye vateveri pachezvako kunokubatsira iwe kuunganidza rumwe ruzivo nezve zvido zvevanhu pamwe nemabatiro avanoona nekushandisa Twitch. Kuedza kubatana nevanhu vari kunze kweTwitch. Enda kumisangano yepamhepo, misangano, uye mimwe misangano yemagariro kwaunosvika pakuziva vamwe zvishoma zvirinani.
Iwe unogona zvakare kusarudza kuenda kunzvimbo dzekushambadzira kana misangano yemavhidhiyo yemitambo inoitwa gore rega rega mumaguta makuru pasirese. Iyo iri pakati pedzakanakisa nzira dzekukura mahara Twitch vateveri, ita shamwari nyowani, uye dzidza zviri kuitwa nevamwe. Supanova, MineCon, uye Twitch Con zvimwe zviitiko zvakakurumbira zveTwitch zvaunogona kuenda. Iwe unogona zvakare kutarisa Facebook neTwitter kune madiki maTwitch meetups anogona kunge ari kuitika muguta rako kana online.
Nzira huru yekuita kubatana pazviitiko kupa bhizinesi rako kadhi pakati pevanoenda. Ita shuwa yekuisa rako rezita paTwitch pamwe nehukama kune ako mamwe enhau enhau maakaunzi. Izvo zvinobatsira kuve neruzivo pamusoro pako zviripo zvirinyore nekuti vamwe vanogona kukurumidza kubatana newe kubva kumidziyo yavo chaipo kana vawana ruzivo.
4. Shandisa mamwe mawebhusaiti enhau
Vazhinji vashandisi veTwitch havazive kukosha kwekushandisa kwavo mamwe masocial media chiteshi kusimudzira kuratidzwa kwechavo. Apa ndipo panonyanya vashandisi veTwitch vanoita zvakanyanya kubva kunetiweki dzavo. Saiti senge Instagram, Twitter, uye Snapchat dzinobatsira kutungamira vashandisi veTwitch kugadzirisa vateveri vavo uye kutaurirana navo nguva dzose.
Iwe unofanirwa kushandisa zvakanyanya masocial media chiteshi nekuti izvo zvinogona kubatsira iwe kuzvizivisa iwe uye chiratidzo chako kune vanotarisira vateveri vanogara munzvimbo dzakasiyana pasi rese. Munyika yanhasi ine hunyanzvi hwepasi rose, vezvenhau vanogona kubatsira kubvarura maburi emuviri uye kuita kuti vateereri vafare nezve zvakafanana zvavanofarira uye zviitiko.
Usangoshandisa ako enhau midhiya nhoroondo kutumira zvinyorwa nezve hupenyu hwako. Ishandise kuudza vateveri vako nezve zvitsva zvemukati. Iwe unogona zvakare kushandisa yako chiteshi kuita hurukuro nevateveri vako muchimiro chemapolls kana inofambidzana Q&A uko iwe kwaunogona kutsvaga mhinduro pane yako zvemukati kana kungoshamwaridzana navo. Izvi zvinobatsira kuvaka mufananidzo wakanaka wechiratidzo chako icho vateveri vachatarisira kusangana navo.
Ramba uchifunga kuti kutumira otomatiki maTweets nezve yako Twitch zvemukati zvinogona kunge zvisiri kuita. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kusarudza kugovana zvaunofarira, mapurojekiti auri kushanda pauri, zvinhu zvinokufadza iwe, kana kunyange kugadzirisa pane yako inotevera rwukova. Izvi zvinobatsira kuita kuti chiteshi chako chive chakasarudzika.
5. Gadzira maitiro ekushambadzira
Unoda kuvaka yakatendeka inotevera paTwitch? Namatira kune yakasarudzika uye kazhinji yekushambadzira purogiramu. Gadziridza vateereri vako pamberi penguva pamusoro pekuti vanofanirwa kupinda riini kuti vaone zvemukati. Gadzira purogiramu uye ugoigoverana nevateereri vako. Iyi inzira inoshamisa yekuvaka kuvimba nevanhu nekusimudzira kuona kwezuva nezuva.
Kugamuchira purogiramu inowirirana yekushambadzira hakuzoite kuti iwe uvimbe nevanhu. Izvo zvinobatsira kukusimbisa iwe sehunyanzvi uyo anotora yavo yekushambadzira basa zvakanyanya uye ane chinangwa chekugovana zvakanaka zvemukati. Kana iwe ukasabatanidza uye unonamira kune yakarongwa yezuva nezuva, saka vatariri vanofarira zvemukati wako uye vanoda kuona zvimwe zvacho havazove nezvakawanda zvekuona. Nekudaro, ivo vanozoenderera kuenda kune mumwe munhu Twitch chiteshi kana kunyangwe kune mamwe mawebhusaiti masaiti.
Ukangotanga kukwezva vateveri, zvakakosha zvikuru kuti varambe vachiita basa kana iwe uchifarira kuvaka basa seyero. Vazhinji vanoyerera vanoita chikanganiso chekusagadzira chirongwa chekugovana zvemukati nguva dzose. Kushanda uchitenderedza purogiramu kuchakubatsira iwe kugara wakarongeka uye nekusiyanisa chiteshi chako kubva kune chevamwe vasina kuenderana.
Goverana yako yemukati purogiramu nevatariri vako kuti vazive apo pavanogona kutarisira kukuwana iwe paTwitch. Sanganisira izvo iwe zvauchange uchitamba uye panguva ipi. Kana, nekuda kwechimwe chikonzero, paine shanduko pane yako purogiramu, yeuka kushandisa ako masocial media chiteshi kana Twitch chiteshi feed kuti utaure nevateereri vako nezve shanduko. Izvi zvinobvumidza vaoni vanofarira kuti vatarisire zvemukati menyu kana zvikaonekwa uye zvakare kuvapa chikonzero chekudzoka kuchiteshi chako mune ramangwana.
Chimwe chinhu ndechekuti iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekufambisa zvemukati kazhinji. Kutenderera kazhinji uye kwenguva yakareba kunowedzera mikana yako yekucherechedzwa nevanhu. Nekupa vateereri vako zvakawanda zvemukati, urikuvapa kukosha kwezvavo zviwanikwa, zvinova zvinokanganisa kuvimbika kwavo nekudyara kwavo pachezako.
Kuti uzive zvakawanda nezvekuti ungawana sei mahara Twitch vateveri, titumirei meseji pano, uye isu tichafara kukurukura dzakasiyana sarudzo newe!
Nei ini ndichida mahara Twitch vateveri?
Isu tese tinoziva kuti kuve neakawanda maTwitch mafeni kune mabhenefiti mazhinji kuTwitch account yako. Paunenge uine vateveri vazhinji, iwe unowanzo gamuchira zvimwe zvinoda, mamwe makomendi, uye akawanda maonero.
Izvi zvinonyatso kubatsira avo vari kuyedza kurarama kana kuwana mukana wekushandisa vachishandisa Twitch. Mushure memakore ekuva vatungamiriri muindasitiri ye "Mahara Twitch Vateveri", isu takagadzira 100% Mahara sisitimu yevashandisi kuwana vateveri vazhinji veTwitch mazuva ese. Iwo emhando yepamusoro uye akananga kune zvaunofarira.
Vateveri veTwitch ava ndeechokwadi here?
Isu tinopa vateki chaivo kune vatengi vedu vakabhadharwa, zvakasiyana ne98% emawebhusaiti kunze uko. Mazhinji mamwe mawebhusaiti anoti anopa iyi yemahara sevhisi, asi ivo havadaro! Isu tinokwanisa kupa iyi yemahara sevhisi nekuti wese fan anowanikwa achishandisa yedu yekutevera inotevera sevhisi mumwe mushandisi senge iwe.
Basa redu inharaunda inobvumidza sevanhu vane pfungwa kuti vawane uye kubatana. Isu tinongova murevereri. Usanyengedzwe nemasaiti anoti anopa vateveri chaivo. Zvagara zvichitaurwa kuti kana zvichitaridzika zvakanyanya kuva chokwadi, zvinogona kunge zviri… uye kuti zvive pachena chose, tinofanira kuziva kuti hunhu hwevateveri huchasiyana. Izvi zvinodaro nekuti vamwe vanhu vanongoisa yakawanda yakawanda nesimba kumaaccount avo kupfuura vamwe. Izvi zvakafanana kuti zvitaurwe nezveTwitch seyakazara.
Saka, usavhunduke kana miniti imwe chete inotonhorera marimi inokutevera uye miniti inotevera munhu wenguva dzose ane mashoma mafoto anoita. Pasinei nezera revateveri iro rese riri kutumirwa kwauri, ivo vanosarudzwa pane zvakafanana zvido iwe zvawakasarudza pawakasaina kusaina kwedu sevhisi.
Ini ndinochengeta sei vateveri vangu veTwitch?
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ibasa redu kuendesa vanhu vatsva kuTwitch peji rako mahara.
Iri ibasa rako kuvachengeta ipapo. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kana peji rako risina zvakawanda zvemukati kana risiri kupa nyowani uye inobata zvemukati nguva dzose manhamba ako anozodonha.
Isu tinoita zvese zvatinogona kupa vanhu vane zvakafanana zvido. Izvi zvinoreva kuti kufungidzira peji rako kuri kupa zvemukati nezve zvaunofarira iwe usati waita chirongwa chemahara kana chakabhadharwa iwe unokwanisa kuchengetedza nekukura peji rako.
Nyanzvi dzinoratidza kuti kutumira zvemukati zvemukati 1-3 nguva pazuva zvinoita sekukwezva mhedzisiro. Izvo zvakakosha kutora nguva yako nezvako zvinyorwa. Ita shuwa kuti iwo mafoto / mavhidhiyo ari epamusoro mhando uye anoenderana nemusoro wenyaya wako Instagram. Chekupedzisira, ita shuwa yekudyidzana nevateereri vako. Kana vakataura pane zvawatumira iva nechokwadi chekuvapindura. Uyezve funga kushanyira peji ravo uye nekuvapa akafanana kana maviri. Ichaenda pamwe nenzira kana zvasvika mukugadzira hukama hurefu-nepeji rako.
Magiya Iwe Unoda Kutanga Yekutenderera Channel paTwitch
Vagadziri vezvemukati vanowedzera, kunyanya vatambi, vari kutendeukira kune inorarama-yekutepfenyura vhidhiyo chikuva inonzi Twitch, uye nezvikonzero zvakanaka. Kune vagadziri vanokoshesa kudyidzana nevatsigiri vavo...
Ko Twitch Combating Hate Raids iri sei?
Kukurumbira kuri kuita kweTwitch kwakaunzawo dzimwe nhau dzakaipa kune vanoyerera. Mumwedzi ichangopfuura, vazhinji veTwitch streamers vakataura kupambwa kweruvengo, kureva, vashandisi vanoshandisa kupambwa kwaTwitch ...
Basa reTwitch mukushandura Nyika yeVhidhiyo Zvemukati Kugadzira
Kwemakumi maviri emakore apfuura, kufarirwa kwekugadzirwa kwevhidhiyo kwakawedzera. Vese vari vaviri vakazvimiririra vanogadzira zvemukati uye mabhureki vatendeukira kune zvevhidhiyo uye vakaravira budiriro, ...
Isu Tinopa Mamwe Ekushambadzira Services
Twitch Services Instagram Services Twitter Services Pinterest Services Huduma dze YouTube Spotify Services SoundCloud Services
Zvema Instagram services, ndapota shanyira webhusaiti yedu webhusaiti, MrInsta.com. Dzvanya apa kuti uone yavo Instagram services
Kune YouTube masevhisi, ndapota shanyira webhusaiti yedu webhusaiti, SubPals.com. Dzvanya apa kuti uone masevhisi avo eYouTube
Iwe unoda yemahara, yepamusoro uye yakanangwa vateveri veTwitch zuva nezuva?
Joinha zviuru zvevanhu vatove kushandisa Streamular zuva rega rega kuwana mahara Twitch vateveri uye zvavanofarira kune avo chiteshi!
Wana mahara, mhando yepamusoro uye yakanangwa neTwitch Vateveri nekungodzvanya mashoma kubva kuInternet anovimbika mupi weTwitch kushambadzira masevhisi.
USA & UNOGONA: 888-881-9070
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuona kuti iwe unowana ruzivo rwakanyanya.